KENYA: Kursiga QM uma adeegsan doonno Khilaafka Somaliya nagala dhaxeeya ee muranka badda | HalQaran.com
Home Wararka Maanta KENYA: Kursiga QM uma adeegsan doonno Khilaafka Somaliya nagala dhaxeeya ee muranka...
KENYA: Kursiga QM uma adeegsan doonno Khilaafka Somaliya nagala dhaxeeya ee muranka badda
Nairobi (Halqaran.com) – Kenya ayaa ku guulaysatay kursi aan joogto ahayn oo ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kadib markii ay codadkii loo baahnaa ka heshay tartankii kala dhexeeyay Jabuuti.
Kenya ayaa wareegga labaad ee doorashada heshay 129 cod, halka Jabuuti ay heshay 62 cod.
Hoggaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka Kenya, Adan Barre Ducaale, ayaa sheegay in dalkiisa uu ka shaqeyn doono wanaajinta ammaanka caalamka, gaar ahaan kan gobolka.
Ducaale ayaa sheegay in dalkiisa aanu kursiga u adeegsan doonin khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya ee salka ku haya muranka xuduud badeedka labada dal.
“Waxaan u maleynayaa in Soomaaliya ay kamid ahayd dalalkii noo codeeyay markii aan musharraxa ka ahayn Midowga Afrika. arinta badda waxay hor taallaa maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Soomaaliya waxay ogoshahay maxkamadda waxay go’aamiso, anagana sidoo kale. Dalal walaalo ah ayaan nahay, mana kala go’ayno,” ayuu yiri Adan Barre Ducaale.
Guusha Kenya ayaa ka dhigan in bisha January 2021 ay muddo laba sano ah kamid noqon doonto 15-ka xubnood ee golaha ugu awoodda badan marka laga hadlayo ammaanka iyo xasilloonida caalamka.
Ugu dambeyn, go’aannada ay Kenya ku lug lahaan karto waxaa kamid ah cunaqabateynta, adeegsiga awood milateri si loo ilaaliyo nabadda iyo weliba doorashada xaakimiinta maxkamadda cadaallada adduunka (ICJ).
u adeegsan dooni